* Light Of Myanmar *: လက်တွေ့ကျကျ ပြောကျမယ် . . . နအဖ ပြုတ်ကျမလား ?
Posted by * In Search of Truth * at 3:14 AM
သန်းရွှေက ဟစ်တလာထက် ကြမ်းလား? ဆက်ဒန် ထက် အာဏာရှိလို့လား? သန်းရွှေ သူ့ရုပ်တုကို မြို့လယ်ခေါင် မှာ မထားရဲသေးပါဘူးဗျာ။
"... ကျချိန်တန်ရင် ကျပါလိမ့်မည်။ ဘယ်သူမှ တားမရပါ။ ဖြစ်ချင်ရင် အားလုံး အဆိုးတွေဆက်တိုက် ဆုံဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ Englishလို "Murphy's Law " လို့ခေါ်ပါသည်။ အဲဒါတွေဖြစ်ပြီးလျှင် သူ့ဘာသာသူ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ အလွဲလွဲ အမှားမှားဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ အဲဒီအခါ ကျဆုံးသွားလိမ့်မည်။ ..."
အခု သူကျချိန်တန်နေပါပြီ။ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ စလွဲချင်နေပြီ။ မကြာတော့ပါ။ ချောက်နှုတ်ခမ်းရောက်နေသူကို ပြည်သူက ဘက်ပေါင်းစုံမှ တွန်းချပေးလိုက်ရုံသာရှိပါသည်။
နအဖ ၏ စီးပွားရေးတွေ ပိတ်ဆို့ပါ။ နိုင်ငံခြား ဘဏ်ကြီးများတွင် အပ်နှံထားသော နအဖ တဖွဲ့လုံး၏ ငွေများ တေဇပိုင်လေယာဉ်များ၊ လုပ်ငန်းများ အားလုံးကို နိုင်ငံတကာ အကူအညီဖြင့် ရသမျှ ပြည်သူပိုင်သိမ်းပစ်ရမည်။ UN ကို အပ်ထားရမည်။
နအဖ မျိုးဆက်များကို ပြည်ပရှိကျောင်းများက လက်မခံရ။ ပညာသင်ကြားခွင့်မပေးရ။ လည်ပတ်ခွင့်၊ ဆေးကုခွင့် မပေးရ။ (အဲဒါကိုမှ Sanction လို့ခေါ်သည်။) ကိုင်း ပြည်သူကို အများကြီး ထိခိုက်သလား?
အခြား တဖက်က ခင်ဗျားပြောတဲ့ နည်းသစ်ကိုလည်းလုပ်ရမည်...
(၃) မင်္ဂလာဆောင်များ၊ အလှူများ၊ အခြားသာရေးနာရေး များ အသုဘမှအဆုံး... ဗိုလ်ချုပ်ကြီး၊ ဗိုလ်မှုးကြီးများ နှင့် သူတို့၏ သားသမီးများ ကို စသည်များကို လုံးမဖိတ်ပါနှင့်၊ လုံးဝ ပန်းကုံး ဆွတ်ခိုင်းခြင်း၊ လက်ထပ်လက်စွပ်ဆင်မြန်းခိုင်းခြင်းများ မပြုလုပ်ရ။ လူမှုရေး ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇန ဟုခေါ်သည်။
(၄) မိမိသားရှိလျှင် စစ်တပ်တွင်း အတင်း မသွတ်သွင်းရ။
(၅) မိမိသမီးရှိလျှင် ဗိုလ်၊ ဗိုလ်ကြီး၊ ဗိုလ်မှုးများ၊ ကြံ့ဖွတ်များ နှင့် လက်မထပ်စေရ။ (မျိုးဆက်ဖြတ်ရန် ဖြစ်သည်။) ယူချင်လျှင် လူအရင်ထွက်ခိုင်းရမည်ဖြစ်သည်။
(၆) ကြံ့ဖွတ်အတွင်း လုံးဝမ၀င်ရ။ (မိဘများကလည်း မွေးကတည်းက သွန်သင်ရမည်။)
(ရ) သတ္တိဗျတ္တိနှင့်ပြည့်စုံသော ရဟန်းအာဇာနည်၊ ယောင်္ကျားအာဇာနည်၊ ကျောင်းသားအာဇာနည်၊ မိန်းမအာဇာနည် များ သည် လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြကြပါလိမ့်မည်။ (သူတို့လို လူမျိုးတွေလည်း လိုပါသည်။)
(၁) ဖော်လံဖားလုပ်၍ ပေါင်းမစားကြပါနှင့်။ (ဘာသာ သာသနာကိုဖျက်ဖို့ ငွေထုတ်ပေးသူများ ဖြစ်သွားပါမည်)
(၂) စွမ်းအားရှင်များ၊ ကြံ့ဖွံ့များကို မိမိတို့စက်ရုံ အလုပ်ရုံများတွင် ရှိနေလျှင် လုံးဝ အလုပ်ဖြုတ်ပစ်ပါ။ အသစ်ဝင်လာလျှင် အထူးစိစစ်ပါ။ ကြံ့ဖွံ့ထဲ ၀င်ခဲ့ဖူးလျှင် ထွက်စာယူခဲ့မှ အလုပ်ခန့်ပါ။ (ကြံ့ဖွတ်၊ စွမ်းအားရှင်ကို အလုပ်ဖြုတ်လို့ ဘယ်သူမှ သင့်ကို လာမဖမ်းပါ။)
မျိုးချစ် အိုင်တီလုပ်ငန်းရှင်များ၊ အိုင်တီသမားများ
(၁) နအဖ ၏ ဆောဖ့်ဝဲများ၊ ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုများ မှအစ၊ ပရောဂျက်များ အဆုံး... လုံးဝ လက်ခံဆောင်ရွက်မပေးရ။
(၂) နအဖပိုင် လုပ်ငန်းများတွင် ၀င်ရောက် လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိပါက အလုပ်ထွက်ရန်ကြိုးစားရမည်။
(၃) အမှန်တရားအတွက် ပုံတိုပုံစလေးပဲရရ နိုင်ငံတကာ မီဒီယာများကို တတ်နိုင်သမျှ email ဖြင့် ပေးပို့ကြရပေမည်။
မြန်မာပြည် လက်ရှိ ဥပဒေအရ အလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာနမှာ မှတ်ပုံတင်ထားသော အလုပ်သမားကို ကြိုတင် အသိမပေးပဲ အလုပ်ဖြုတ်လျှင် တရားစွဲဆို လျော်ကြေးတောင်းခံရနိုင်ပါသည်။